Land Rover ထုတ်လုပ်သူများအတွက်အဝေးထိန်း key Land Rover စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများအတွက် China Remote Key
Land Rover အတွက်အဝေးထိန်းခလုတ်
Landrover Range Rover အတွက် 315 / 433mhz id44 pcf7935 ချစ်ပ်ပါသောခလုတ်ခုံသုံးခလုတ်
၃၉၅ / ၄၃၃mhz ပါသောခလုတ် ၃ ခုနှင့် 7935 ချစ်ပ်ပါသော Landrover Range Rover ကြိမ်နှုန်း: 315 / 434mhz ချစ်ပ်: id44 / pcf7935 FCCID: ကားမော်ဒယ်: Landrover Range Rover ခလုတ်: သော့၊ သော့ဖွင့်ခြင်း၊ ထရပ်ကားများ။ / Acura / FOR Alfa FOR / Audi FOR / Benz အတွက် / BMW အတွက် / Buick / FOR Cadillac / အတွက် Chevrolet / FOR Holden / Chrysler / FOR Citroen / Ford / Ford Fiat / GM FOR FOR Honda / FOR Hyundai / FOR Kia / FOR Landrover / FOR Lexus / FOR Mazda / FOR Maserati / Mitsubishi FOR / Nissan / FOR opel / F ...
ကားသော့ခလုတ်အတွက် PANASONIC VL2330 2330 အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်လီသီယမ်ဘက်ထရီဒြပ်စင်အသစ်
ကား၏ခလုတ်အတွက် PANASONIC VL2330 2330 အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်လီသီယမ်ဓာတ်ခဲဓာတ်ငွေ့ဆဲလ်အတွက်မူရင်းအသစ်။ Model: VL2330 ၁၈၀ ဒီဂရီတံသင်ဓာတုဗေဒ - လီယွန်အမည်ခံဗို့အား: ၃V သက်တမ်းသက်တမ်း - ၅ နှစ်ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သည်။ ဟုတ်သည်အချင်း: 20mm / 0.19” အမြင့်: 2.0mm / 0.06 BMW ကား၊ Acura၊ Alfa ကား၊ Audi ကား၊ Benz ကား၊ BMW Buick / Cadillac FOR Chevrolet FOR / FOR Holden၊ Chrysler FOR FOR Ford FOR FOR Fiat သို့ကားသော့အမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ / GM အတွက်၊ Honda အတွက် / Hyundai FOR Kia / FOR Landrover / FOR Lexus / ... အတွက် GM၊
အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီ VL2020 မော်ဒယ်၊ အဝေးထိန်းခလုတ်အတွက် 3V ကားသော့အတွက် ၉၀ ဒီဂရီ
အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီ VL2020 မော်ဒယ်၊ အဝေးထိန်းသော့အတွက် 3V မော်ဒယ်: VL2020 ၉၀ ဒီဂရီတံသင်ဓာတုဗေဒ - လီယွန်အမည်ခံဗို့အား: ၃ ဗယ်သက်တမ်း: ၅ နှစ်ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်: အင်းအချင်း - 20mm / 0.19” အမြင့်: ၂.၀ မီလီမီတာ / 0.06” အမျိုးမျိုးတို့ကိုထောက်ပံ့သည်။ ကားသော့: BMW FOR / Acura FOR / Alfa FOR / Audi FOR / Benz / BMW / Buick / FOR Cadillac / Chevrolet FOR / FOR Holden / Chrysler / FOR Citroen / Ford / Ford Fiat / GM / FOR Honda သို့ FOR ကား၊ / FOR Hyundai / Kia / FOR Landrover / FOR Lexus / FOR Mazda / FOR Maserati / FOR Mitsubish အတွက် ...
49 chip နှင့်အတူ 315mhz 434MHZ နှင့်အတူ landrover4+ 1 button ကိုဝေးလံခေါင်သီ
Land Rover4+ 1 ခလုတ်အဝေးထိန်း Car Remote Key 315 / 434MHz 49 ချစ်ပ် Land Rover Discovery Freelander Range Rover Sport Evoque Jaguar Button: ၅ ခလုတ်များအလွတ်ခုံ - ဟုတ်သည်ကြိမ်နှုန်း - ၃၁၅Mhz / 434Mhz အီလက်ထရောနစ်ဘုတ် - ရှိသည်။ ဘက်ထရီ - Alixpress စံသာတင်ပို့ခြင်းသို့မဟုတ်သာလျှင်။ Singapore Shipping သည်ဘက်ထရီကိုအတူတကွပေးနိုင်သည်။ ပစ္စည်းကိရိယာ: Jaguar F-Type 2014-2017 အတွက် Jaguar XE 2016-2018 အတွက် Jaguar F-Pace 2017-2019 အတွက် Jaguar XF 2013-2018 အတွက် Jaguar XJ 2011-2017 အတွက် Land Rover Discovery 2015-2018 အတွက် ...
ဖော်ပြချက်အခြေအနေ: ၁၀၀% အသစ်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်သောပစ္စည်းအမည်: ကားသော့ခလုတ်ခလုတ် ၂/၃ ခလုတ်ခတ်နှုန်း： 433Mhz Key Blank: ဟုတ်သည်။ အီလက်ထရောနစ်ဘုတ်ပြား: ဟုတ်ပါသည်။ ဘက်ထရီ - ဟုတ်ပါသည်။ Transponder ချစ်ပ်: ဟုတ်သည် (4D63 Chip) အမှတ်တံဆိပ်တံဆိပ် / စတစ်ကာ: မဟုတ် ( Aliexpress အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်ရောင်းရန်တားမြစ်သည်။ ) Fit: Mazda3BK Series2၂၀၀၆-၂၀၀၉ အတွက် Mazda BT50 2006 - 2019 ဖော်ပြချက်: ကုန်ပစ္စည်းတွင်အဓိကကျသည့်အိမ်၊ ဓါး၊ တိုက်ဘုတ်၊ ချစ်ပ်နှင့်ဘက်ထရီတို့ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်အဝေးထိန်းခလုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရေးကြီးမှတ်ချက် - ၁။ ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ။
Flip Remote key3ခလုတ်ကို Land Rover Range Rover KEY အတွက် 433MHZ 315mhz pcf7935 ချစ်ပ်ပါသောကားသော့။
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Land Rover Range key Rover key သော့ချက်များ 433MHZ 315mhz pcf7935 ချစ်ပ်ပါ ၀ င်သောအဝေးထိန်းခလုတ် ၃ ခလုတ်ကားသော့သည်မူရင်းသော့အဖြစ်အသုံးပြုသူအဆင်ပြေသောထိတွေ့မှုမူရင်းခလုတ်များနှင့်ကောင်းစွာကိုက်ညီနိုင်ပြီးဖြတ်မထားသည့် Blade Key Protection Cover Holder Flip Remote Key Case Shell သတ်မှတ်ချက်များအကောင်းဆုံးအသုံးအဆောင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအတွက် Land Rover Rover KEY အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအရွယ်အစားမူရင်းစံပုံစံအဝေးထိန်းအရောင်အနက်ရောင်ပလပ်စတစ်အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) 0.05 ကျွန်ုပ်တို့ ...
5 ခလုတ် 315 / 433Mhz ID46 PCF7945 Range Rover Freelander2LR2 Sport Remote Control အတွက်ကားအဝေးထိန်းသော့ခ
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ဤနေရာတွင် Land Rover ကားများအတွက် Smart key 315 / 433Mhz အသစ်တစ်ခုကိုတွေ့ရသည်။ ဒီ key ကို 433Mhz ကြိမ်နှုန်းရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်ကားအတွက်မှန်ကန်သောရွေးခြယ်ပါ သင်၏သော့ကိုဒေသခံအရည်အချင်းပြည့်မှီသောကုန်သည် / သော့ခတ်သူမသုံးမီပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤသော့သည်ကျွန်ုပ်၏ကားနှင့်အဆင်ပြေကြောင်းမည်သို့သိနိုင်သနည်း။ သင်၏မူရင်းသော့သည်စမတ်သော့ဖြစ်သည်။ သင်၏မူလသော့သည်တူညီသောခလုတ်များရှိသည်။ သင်၏မူရင်းသော့သည်တူညီသောကြိမ်နှုန်းရှိသည်။ အထက်ပါအချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကဤကုန်ပစ္စည်းကို ၀ ယ်ရန်အဆင်ပြေပါကသင်သည်လက်ကားရောင်းသူဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။
စမတ်အလိုအလျောက်သော့ခလုတ်ခလုတ်ခလုတ်ခုံ 434mhz 315mhz PCF7953 ချစ်ပ်အတွက် Land Rover Range Rover Sport 2010 2011 2012 key အတွက်
အဓိကအချက်များအသုံးပြုသူအဆင်ပြေသောမူရင်းသော့အဖြစ်ထိတွေ့မှုမူရင်းကားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ကောင်းစွာကိုက်ညီနိုင်သည်ဖြတ်ပိုင်းမထားသည့်အကာအကွယ်အကာအကွယ်အဖုံး Holder Flip Remote Key Case Shell အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ Land Rover Range Rover အတွက်အသုံးဝင်သောအသုံးအဆောင် KEY အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအရွယ်အစားမူရင်းစံပုံစံအဝေးထိန်းအရောင်အနက်ရောင်ပလပ်စတစ်အသားတင်အလေးချိန် ( ကီလိုဂရမ်) ၀.၅၅ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကားသော့အမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့သည်။ BMW၊ FOR Acura / Alfa FOR / Audi FOR / Benz / BMW / Buick / FOR Cadi အတွက်…
L0070 3button ဝေးလံသောကားသော့ 433Mhz HU92 သော့ချက် PCF7935 ID44 ချစ်ပ် Landrover Range Rover L322 key fob အတွက်
1. နံပါတ်: # L0070 2. ချစ်ပ်: PCF7935 ID44 ချစ်ပ် 3. ကြိမ်နှုန်း: 433Mhz 4. ခလုတ်: 3button ကို 5. အဓိကပရိုဖိုင်းကို: HU92 Key ကို 6. သက်ဆိုင်သောမော်ဒယ်များ: Landrover Range Rover L322 အတွက် * 50% - 90% ကုန်သည်ကုန်သည်စျေးနှုန်းလျှော့ချ * ၁၀၀% စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ငွေပြန်အမ်းခြင်း * ဝေးလံခေါင်ဖျားမှုအားလုံးကိုစမ်းသပ်ပြီးအလုပ်လုပ်ရန်အာမခံထားသည်။ * ၁၀၀% အီလက်ထရောနစ်၊ transponder ချစ်ပ်နှင့်ဘက်ထရီတို့ဖြင့်ပြည့်စုံသည်။ * ကားအရောင်းကိုယ်စားလှယ်အားသော့ခတ်ဖြတ်ပြီးသင်၏ယာဉ်သို့ဝေးလံခေါင်ဖျားသော program ကိုလျှော့ချရန်နှင့်ကားသော့အမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည်။ & n ...